Nepal Army Archives - नेपाल आज
Nepal Army	समाज
कानुनले छुँदैन नेपाली सेनालाई ?: सेना मान्दैमान्दैन
वैशाख ३ । कुनैपनि घर निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र नलिए घरमा धारा, पानी, बिजुलीलगायतका कुनैपनि सामाग्री जोड्न पाइदैन । यतिसम्म कि बैंकिङसम्बन्धी कुनै काम गर्नुपरे निर्माण सम्पन्न भएको देखाउनैपर्छ । तर कतियप सरकारी कार्यालयले निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र नलिईकनै मनोमानी रुपमा घर निर्माण गरिरहेका छन् । सबैभन्दा बढी कानुन उल्लंघन गर्ने संस्थाको रुपमा नेपाली सेना देखिएको छ […]
नेपाल–चीन संयुक्त सैन्य तालिममा भाग लिन चिनीया सेना नेपालमा
वैशाख ३ । नेपाली सेना र चिनियाँ जनमुक्ति सेनाबीच सोमबारदेखि संयुक्त सैन्य तालिम हुँदैछ । नेपाली सेनाको विशेष फौज मानिने युद्धभैरव गण र चीनको विशेष फौजबीच संयुक्त तालिम हुन लागेको हो । नेपाली सेनाका अनुसार तालिममा भाग लिन चिनियाँ सैन्य टोली काठमाडौं पुगेको छ । तालिमको नाम ‘सगरमाथा फ्रेन्डसिप २०१७’ दिइएको छ । १२ वैशाखसम्म […]
सेनामा भ्रष्टाचार, राशन खरिदमा कमिशनको खेल
चैत्र १४ । सैनिक मुख्यालयले सेनाका लागि रासन आपूर्ति सम्झौता सर्तविपरीत बीचमै ठेक्का रद्द गरेपछि ठेकेदारहरू अदालत पुगेका छन् । सैनिक पृतनाहरूले ठेकेदार कम्पनीले सहमतिअनुसार रासन आपूर्ति गर्न नसकेको भन्दै एकतर्फी रूपमा ठेक्का तोडेपछि त्यसमा थुप्रै अनियमितता र कमिसनका खेलहरूले समेत भूमिका खेलेको देखिएको छ । पश्चिम पृतनाका सेनानी गुणराज अधिकारीले एनईएस प्रालिलाई पत्र लेखी […]
नेपाली सेनाको प्रवक्तामा कडायत
चैत्र १० । नेपाली सेनाले सहायक रथी झङ्करबहादुर कडायतललाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी तोकेको छ । प्रवक्ता ताराबहादुर कार्की केही दिनमै सेवानिवृत्त हुन लाग्नुभएकाले नेपाली सेनाले विशेष फौज १० नं बाहिनी का बाहिनीपति कडायतलाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिएको हो । नेपाली सेनामा ३५ वर्ष सेवा पुर्याएका कार्कीले डेढ वर्ष प्रवक्ताको जिम्मेवारी सम्हाले । बाहिनीपति कडायतले भारतमा सैनिक सहचरीको जिम्मेवारी […]
२८ देशका १ हजार २४ सैनिक नेपालमा
चैत्र ७ । नेपाली सेनाको वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्र पाँचखालमा सोमबारदेखि २८ मुलुकका एक हजार २४ सेनाले संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्दैछन् । नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाको एसिया प्यासिफिक कमान्डको संयुक्त आयोजनामा हुने बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास २१ चैतमा समापन हुनेछ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबार पाँचखालमा सैन्य अभ्यास उद्घाटन गर्दै छन् । सैन्य अभ्यासलाई […]
राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी उच्चस्तरीय तालिम सन्चालन
Posted on: February 28, 2017Posted by: netra
फागुन – १७ । नेपाली सेनाले केही मन्त्रालय तथा मातहतका निकायमा नीति–निर्माण तहमा काम गर्ने माथिल्लो तहका राष्ट्रसेवकका लागि राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी उच्चस्तरीय तालिम सन्चालन गरेको छ । शिवपुरीस्थित नेपाली सेनाको कमान्ड एन्ड स्टाफ कलेजमा सुरु भएको १० दिने उक्त तालिममा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रथम श्रेणीका अधिकृत तथा […]
नेपाली सेनामा सेनापतिहरुको मनपरी
Posted on: February 19, 2017February 20, 2017Posted by: Tirtha Khanal
फागुन ८ । पुनरावेदन गरेको झण्डै ३० महिनापछि १३ जेठ २०७३ मा उपरथी प्रेमप्रकाश थापामगर सैनिक विशेष अदालतबाट निर्दोष ठहर भए । पुनरावेदन अदालत पाटनका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ अध्यक्ष, रक्षासचिव महेशप्रसाद दाहाल र नेपाली सेनाको प्राड विवाक (कानुनी विभाग) प्रमुख उपरथी होमकुमार लावती सदस्य रहेको विशेष अदालतले थापालाई निर्दोष ठहर गरेको हो । प्रधानसेनापति राजेन्द्र […]
सेनामा उच्च तहको दरबन्दी घटाउन सुझाव
Posted on: February 10, 2017Posted by: Tirtha Khanal
माघ २८ । विज्ञहरुले नेपाली सेनामा माथिल्ला पदका दरबन्दी घटाउन र तल्लो तहमा दरबन्दी बढाउने गरी पुनःसंरचना गर्न रक्षा मन्त्रालयलाई सुझाव दिएका छन् । सेनाको पुनःसंरचना गर्न रक्षा मन्त्रालयलाई पूर्वकामु सचिव देवेन्द्र सिटौलाको संयोजकत्वमा गठित समितिकले रक्षा मन्त्रालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा माथिल्ला पदमा दरबन्दी बढाउँदा बढुवा हुन अस्वस्थ प्रतिस्पर्धासंगै राजीतिक हस्तक्षेप हुनसक्ने खतरा औल्याँदै घटाउन सुझाएको […]
सुरक्षा निकायहरू : सुरक्षालाई लत्याउँदै व्यवसायमा ध्यान
माघ २३ । मुलुकका सुरक्षा संगठनहरू आफ्नो मूख्यालयको सुरक्षा, काम र जिम्मेवारीलाई लत्याउँदै व्यवसायतर्फ लम्किएका छन् । नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफ र नेपाल प्रहरीले आफ्नो संवैधानिक दायित्वमा भन्दा बढी व्यवसायमा ध्यान दिन थालेका हुन् । नेपाली सेनाले सुन्धरास्थित जंगी अड्डा परिसरको पश्चिम भागमा रहेको ‘आर्मी अफिसर्स क्लब’ मा विवाह, बतवन्ध, किताब विमोचन, स्कुल […]
सेनाका मेजर युवतिकाण्डमा मुछिएपछि…
माघ १९ । नेपालीको छुकछुके बानी, कहिल्यै नजाने । शान्ति सेनाअन्र्तगत लाइबेरिया मिसनमा खटिएका मेजर गणेश रायामाझी एउटी डच (नेदरल्याण्डी) सैनिक युवतीमाथी यौन दुव्र्यवहार गरेपछि छानबिनमा परेका छन् । अनुसन्धान प्रक्रिया टुङगिनासाथ उनलाई नेपाल फर्काइने भएको छ । ती युवती पनि आफनो देशको तर्फबाट सोही मिसनमा खटिएकी थिइन् । यसैविच, नं. ९ वाहिनी सिन्धुलीमा कार्यरत […]
नेपाली सेनाको गाडी दुर्घटना ३३ जना घाइते,३ को अवस्था गम्भिर
Posted on: January 8, 2017Posted by: Tirtha Khanal
पुस २४ । शनिबार राति परेको हिमपातका कारण भिदत्तराजमार्गको साउखर्कमा अवरुद्ध भएको बाटो खोलेर फर्किने क्रममा नेपाली सेनाको लु १ ना २९४ नम्बरको (वान टन) ट्रक दुर्घटना हुदाँ ३३ जना सेना घाइते भएका छन् । घाइते मध्ये ३ जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ । शनिबार राति देखि अबरुद्ध रहेको भिमदत्तराजमार्गको हगुल्टे सडक खण्ड खुलाई फर्किने […]
के लाग्यो र रहर मर्दै गएपछि..
Posted on: December 21, 2016Posted by: Tirtha Khanal
पुस ५ । विदेशसँग खुल्ला सिमाना भए पनि छिमेकीसँग लड्नु नपर्ने एउटा सरकारी जागिर छ, सेनाको । मुलुक सार्वभौम भएको प्रमाणित गर्ने निकाय पनि हो, राष्ट्रिय सेना । तर अहिले यसको आर्कषण एकदम घट्दो छ । तर मधेशकेन्द्रित दलहरुले सेनामा सामूहिक प्रवेशको कुरा उठाइरहका छन् । सेनाका अधिकृका निम्ति गतसाता भएको परीक्षामा एक सय ५० […]
मनमोहन गोल्डकप प्रतियोगिताको उपाधि आर्मीलाई
Posted on: December 4, 2016Posted by: Tirtha Khanal
मंसिर १९ । सुनसरीको दुहवी भलुवा नगरपालिकामा जारी मनमोहन गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ । प्रतियोगितामा आर्मी क्लबले उपाधि हात पारेको छ । फाइनल खेलमा मनाङ–मस्र्याङ्दी क्लबलाई अतिरिक्त समयको खेलमा गोलको सहयोगमा पराजित गर्दै आर्मी क्लबले उपाधि हात पारेको हो । आर्मी क्लबले टाइब्रेकरमा पाँच÷पाँच गोल भए पनि अतिरिक्त समयको खेलमा थप एक गोल […]
Posted on: November 29, 2016Posted by: netra
मंसिर – १४ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पहिलो प्रतिनिधिका रुपमा अफ्रिकी मुलुक लिबियामा शान्ति स्थापनाका लागि नेपाली सेना तैनाथ हुने भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा नेपाली सेनाले शान्ति सैनिकका रुपमा पहिलो डफ्फाअन्तर्गत स्पेसल गार्ड युनिटलाई यसै महिना त्यहाँ खटाउन लागेको हो । प्रमुख सेनानी सुवास थापाको नेतृत्वमा जान लागेको दुई सय ३४ जनाको उक्त डफ्फाले […]
युवासंघले गर्यो बुढानिलकण्ठको सरसफाइ
Posted on: November 15, 2016November 15, 2016Posted by: nishesh
कात्तिक – ३० । युवा संघ नेपाल जिल्ला कार्यकमिटीद्वारा काठमाडाैं बुढानिलकण्ठमा मंगलबार बिहान सरसफाइ अभियान सम्पन्न गरेको छ । हरिबोधिनी एकादशीको अवसरमा कात्तिक २५ देखि २९ गतेसम्म लागेको मेलामा भएको फोहोर युवासंघको अगुवाइमा व्यवस्थापन गरिएकाे हाे । उक्त सरसफाइ कार्यक्रममा नेपाल प्रहरी, नेपाली सेनाको सहभागिता रहेको युवासंघले जनाएको छ । सरसफाइ कार्यमा संकलन भएको करिब […]
नेपाली सेनाले खोल्यो विभिन्न पदमा २ हजार १८ जनालाई रोजगारीको अवसर
Posted on: October 17, 2016Posted by: Tirtha Khanal
कात्तिक १ । नेपाली सेनाको विभिन्न पदहरुमा नयाँ भर्ना आह्वान गरिएको छ । सेनाको भर्ना छनोट निर्देशनालय कार्यरथी विभागले एक सूचना जारी गरी विभिन्न पदहरुमा भर्ना खुल्ला भएको जनाएको छ । विज्ञापन हेर्नुहोस
दशैमा नेपाली सेनाको निःशुल्क बस सेवा
Posted on: October 10, 2016Posted by: Tirtha Khanal
असोज २४ । दशैंभर यात्रुलाई सुविधा दिन भन्दै नेपाली सेनाले काठमाडौँ उपत्यकामा निःशुल्क बस सेवा शुरु गरेको छ । बुधवारसम्म जारी रहने सो सेवा अन्तर्गत विभिन्न मार्गका लागि आठ गाडी सञ्चालन गरिएको छ । गाडी नवमी र दसैंका दिन मध्याह्न १२ र साँझ ४ बजे दुइ पटक तथा एकादशीका दिन बिहान ६ बजे सेवा थप […]
सेनालाई उपेक्षा गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री र सभामुखसँग रक्षामन्त्री फायर
Posted on: September 20, 2016Posted by: Tirtha Khanal
असोज ४ । रक्षा मन्त्री बालकृष्ण खाँणले पछिल्ला राजनीतिक परिवर्तन र संविधान घोषणा सुरक्षा निकायको भूमिकालाई प्रधानमन्त्री र सभामुखले वेवास्ता गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। खाँणले पहिलो संविधान दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सभामुख ओनसरी घर्तीले गरेको लिखित सम्बोेधनमा संविधानसभा गठन प्रक्रियासम्म आइपुग्न आफ्नो जिउ ज्यानको प्रवाह नगरी जनचाहनालाई पुरा गर्न […]
यसरी छुटायो नेपाली सेनाले सर्वसाधारणलाई आतंककारीको पञ्जाबाट (फोटोसहित)
Posted on: September 19, 2016Posted by: Tirtha Khanal
असोज ३ । विश्वमा बढ्दै गएको आतंककारी गतिविधीलाई दृष्टिगत गर्दै आतंकबादी घटना नेपालमा भएमा त्यसलाई सशक्त रुपमा प्रतिकार गर्न नेपाली सेना तयारी अवस्थामा छ । विशेष फौज, पैदली फौज, सपोर्टिङ्ग युनिटहरु र अन्य सुरक्षा निकायहरु समेतलाई एकीकृत र समन्वयात्मक ढङ्गबाट परिचालन गर्ने उद्धेश्यले आंतक प्रतिकार अभ्यास सेनाले भक्तपुरमा संचालन गरेको छ । अभ्यासको समाप्ती पश्चात […]
बर्दीको आडमा बलजफ्ती
Posted on: September 18, 2016Posted by: Tirtha Khanal
असोज २ । जंगी अड्डाका उच्च सैनिक अधिकारीहरु अचेल दुइ पक्षप्रति अत्यन्तै आक्रोशि देखिन्छन् । पहिलो संविधानको धारा २ सय ४३ ले गरेको सैनिक सेवामा पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था प्रति किन भने, संविधनको उक्त धाराको उपधारा(२) ले नेपाली सेनाको कुनै पदमा पदपूर्ति गरिँदा लिखित परीक्षा लोकसेवा आयोगले लिने व्यवस्था गरेको छ । संविधानमा स्पष्ट छ ‘निजामती सेवाको […]
पासपोर्ट नभएर शान्तिसेना गएका २ सय ३२ नेपाली शान्ति सैनिक फिर्ता
Posted on: September 15, 2016September 15, 2016Posted by: Tirtha Khanal
भदौ ३० । दक्षिण सुडान सरकारले राहदानी नबोकी खार्तुन विमानस्थल पुगेका २ सय ३२ नेपाली शान्ति सैनिकलाई काठमाडौंमै फिर्ता गरेको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सुडानको राजधानी खार्तुन पुगेका नेपाली शान्ति सैनिकलाई राहदानी नभएपछि त्यहाँको अध्यागमन विभागले विमानस्थलबाटै नेपाल फर्काएको छ । ‘राहदानी बिना प्रवेश सम्भव छैन, दक्षिण सुडान अध्यागमनका अधिकारीको भनाइ उदृत गर्दै सैनिक […]
नेपाली सेनाले माग्यो १ सय ५० अधिकृत क्याडेट (विज्ञापनसहित)
Posted on: August 31, 2016Posted by: Tirtha Khanal
भदौ १५ । नेपाली सेनाको स्वीकृत दरबन्दीभित्र रिक्त अधिकृत क्याडेट पदमा भर्ना आह्वान गरिएको छ । नेपाली सेनाको भर्ना छनौट निर्देशनालय कार्यरथी विभागले बुधबार भर्नाका लागि एक विज्ञापन आह्वान गर्दै रिक्तपदमा समावेशी तथा खुल्ला प्रतिस्पर्धामार्फत पदपूर्ति गरिने उल्लेख गरेको छ । इच्छुक उम्मेद्दारले आगामी असोज १३ गतेभित्र तोकिएको भर्ना केन्द्रमा गएर फाराम बुझाउन सक्नेछन् । […]
प्रधान सेनापति क्षत्री र सयुक्त राष्ट्र संघीयका प्रतिनिधि अतुल खरेबीच भेटवार्ता
Posted on: August 29, 2016Posted by: netra
भदाै – १३ । प्रधान सेनापति महारथी राजेन्द्र क्षत्री र सयुक्त राष्ट्र संघीयका फिल्ड सपोर्ट विभागका सहसचिव अतुल खरेबीच जंगी अड्डामा भेटवार्ता भएको छ । भेटवार्ताका क्रममा खरेसंग संयुक्त राष्ट्र संघको अनुरोधमा नेपाली सेनाले विश्व शान्तिको लागि पु¥याउँदै आएको बहु–आयामिक योगदान र आगामी दिनहरुमा गरिने सहयोग एवम् सहकार्यका क्षेत्रहरुलाई कसरी विस्तार गर्ने र नेपालमा शान्ति […]
बर्दिया निकुञ्जभित्र सेना र शिकारीबीच गोली हानाहान
Posted on: August 24, 2016Posted by: netra
भदौ – ८ । बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्र नेपाली सेना र शिकारीबीच गोलि हानाहान भएको छ । बर्दियाको बाँसगढीदेखि उत्तरमा पर्ने चुरेपहाडको फेदि भासतालदेखि पूर्व घट्टे कुला नजिकै गस्तीमा रहेको सेना र निकुञ्जको संयुक्त टोलीमाथि शिकारीले गोली चलाएपछि जवाफ स्वरुप सेनाले चलाएको थियो । गस्तीमा गएको टोलीलाई निकुञ्ज भित्र भास तालदेखि पूर्व घट्टे कुला नजिकै […]
खोटाङका विद्यार्थीलाई सेनाकाे सहयाेग
Posted on: August 13, 2016Posted by: nishesh
साउन २९ । नेपाली सेनाले खोटाङका केहि विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री प्रदान गरेको छ । शेरगण मुढे व्यारेक दिक्तेलले च्यानडाँडा, डाँडागाउँ र दोर्पा चिउरीडाँडाका जेहेन्दार र गरीब छात्ररछात्रालाई भलिबल, फुटबल, कापी, पेन्सल लगायतका खेलकुद तथा शैक्षिक सामग्री प्रदान गरेको हो । दोर्पा चिउरीडाँडाको दोबेला निम्न माध्यमिक विद्यालयका छात्ररछात्रालाई भलिबल, एक दश दर्जन कापी, पाँच दर्जन पेन्सल […]
प्रहरी जवान र सैनिक हवल्दारको महानिरिक्षक उपेन्द्र कान्त अर्यालको कार्यकक्षमा रमिता
Posted on: August 12, 2016Posted by: Tirtha Khanal
साउन २८ । प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालको सरकारी निवासको उत्तर भागमा बर्दीमा रहेका प्रहरी जवान र बिनाबर्दीका एक युवकबीच भनाभन चल्दै थियो । बिनाबर्दीका युवकलाई उकेरा लाउँदै थिइन् एक युवती एकैछिनमा दुई पक्षबीचको विवाद चर्काचर्की हुँदै हात हालहालमा परिणत भयो । बर्दीधारीमाथि बिनाबर्दीका युवकले हेल्मेट प्रहार गरे । हत्तपत्त प्रहरी प्रधान कार्यालयको सुरक्षामा खटिएका प्रहरी […]
एक हातमा बन्दुक र अर्को हातमा कलम बोक्ने एक सैनिक अधिकृतको कथा
Posted on: August 10, 2016August 10, 2016Posted by: नेपाल आज प्रभात
भनिन्छ खाने मुखलाइृ जुँगाले छेक्दैन यस्तै यउटा उदाहरणीय पात्र बनेका छन् नेपाली सेनाका कर्णेल डा. आसबहादुर तामाङ । नेपाली सेनाका कर्नेल आसबहादुरको ‘जीवनको राज’ यही एउटा शब्दमा सीमित छ । मिहिनेतले गाइड गरिरहेको उनको जीवनको आदर्श हो, ‘सादा जीवन, उच्च विचार ।’ यही मन्त्रलाई आफ्नो गुरुमन्त्र मानेकैले हुनुपर्छ, नेपाली सेनाको कर्नेल पदका आसबहादुर काठमाडौंमा सार्वजनिक […]
हेलिकप्टरद्वारा ५८ बाढीपीडितलाई सुरक्षित स्थानमा सारियो
Posted on: July 9, 2016Posted by: नेपाल आज सन्ध्या
असार – २५ । भोटेकोसी नदीमा आएको बाढीका कारण जोखिममा परेका तातोपानि, लिपिङ, लार्चाका बासिन्दालाई नेपाली सेनाले बाह्रबिसे तथा काठमाडौँमा सारेको छ ।बाह्रबिसे तातोपानी सडकखण्ड अवरुद्ध भएपछि नेपाली सेनाको एमआइ १७ हेलिकोप्टरबाट उनीहरुलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको हो । बाढीले सडक कटान गरेर यातायातमा समस्या भएको तथा विभिन्न ठाउँमा पहिरो जान थालेपछि उक्त क्षेत्रका स्थानीयलाई सुरक्षित स्थानतर्फ […]
नेपाली सेनाद्वारा ७ पहिरो पीडितको उद्धार
Posted on: July 3, 2016Posted by: नेपाल आज सन्ध्या
असार – १९ । नेपाली सेनाले पहिरोमा थुनिएका ७ जनालाई उद्धार गरेको छ । धादिङको चेप्रांगमा पहिरोको कारणले बिचमै थुनिएका थिए । चेप्रांगमा गएकाे पहिरोमा थुनिएका मध्ये ७ जनाको उदार गरेको छ । नेपाली सेनाको प्रयोग गरी पहिरो पीडितलाई उद्धार गरिएको नेपाली सेनाले प्रेस विज्ञप्त जारी गर्दै बताएको छ । उद्धार कार्यमा सेनाको डिजास्टर एसिस्टन्स् […]
‘बम’ राखिएको शब कुर्दै गाउंवासी डांडामा रात बिताउन बाध्य भए, युद्धको त्यो कालरात्री !
Posted on: July 3, 2016July 6, 2016Posted by: नेपाल आज प्रभात
माओबादीद्वारा मारिएका लमजुङका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीका छोरा सुमन अधिकारी १५ बर्ष यता न्यायका लागि धाइरहेका छन् । न्यायको नामोनिशाना भेटेका छैनन् । यस्तैमा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले उजुरीको आह्वान ग¥यो । द्वन्द्वपीडितका उजुरीको चाङमा उनको उजुरीपनि मिसिएको छ । उजुरी दिने म्याद असार २९ सम्ममा उनको उजुरीमाथि अझ ठूलो खात लाग्ने निश्चित छ । न्याय […]
सेनापति महारथी क्षत्री र सूचना आयोगका प्रमुख बाँस्कोटाबीच भेट
Posted on: June 10, 2016Posted by: नेपाल आज प्रभात
जेठ-२८, गते प्रधान सेनापति महारथी राजेन्द्र क्षत्री राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाबीच सूचनाको हक सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम जंगी अड्डामा सम्पन्न भएको छ । उक्त कार्यक्रममा प्रधान सेनापति महारथी क्षत्रीले आफनो मन्तव्य राख्दै सार्वजनिक सरोकारका संस्थाहरुको काम कारबाहीलाई पारदर्शी, खुल्ला, नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन बताए। जारी भएको सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन २०६४ का […]
एकल काँतातर्फको पहिलो उपाधि सशस्त्र प्रहरीको कव्जामा
Posted on: June 3, 2016June 3, 2016Posted by: नेपाल आज प्रभात
जेठ – २१, खोटाङमा जारी ‘प्रथम खोटाङ–हलेसी खुला अन्तर्राष्ट्रिय कराते प्रतियोगिता’को महिला तथा पुरुष एकलकाँतातर्फको पहिलो उपाधि सशस्त्र प्रहरीले हात पारेको छ । सदरमुकाम दिक्तेलको माटिकोरे खेलमैदानमा शुक्रबार आयोजित प्रतियोगीतामा पुरुष एकल काँतामा सशस्त्रका पर्शुराम बस्नेत प्रथम, आयोजकका मोतीचन्द्र राई दोश्रो, पूर्वाञ्चलका रोहित राई तेश्रो र भुटानका दिवान मगर सान्त्वना भएका छन् । यस्तै, महिला […]
नेपाली सेनाले अस्थायी आवास निर्माण गर्ने
Posted on: June 1, 2016Posted by: नेपाल आज प्रभात
नेपाली सेनाले गोरखा, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलान्चोक, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, मकवानपुर र ओखलढुंगाका ४४० भूकम्प पीडित परीवारलाई अस्थायी आवास निर्माण गर्ने भएको छ । नेपाल सरकारबाट सुम्पिएका जिम्मेवारीहरु सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नै प्रतिवद्धता समेत जनाएको छ ।